Farriimo Dhiirrigelin ah oo Naga Soo Gaaraya Akhristayaasheena | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home BOGGA HORE Farriimo Dhiirrigelin ah oo Naga Soo Gaaraya Akhristayaasheena
Farriimo Dhiirrigelin ah oo Naga Soo Gaaraya Akhristayaasheena
Muqdisho/Nayroobi/Kuala Lampur (XT): Maanta waa maalin ku weyn shacabka Soomaaliyeed oo u dabbaal degaya munaasabba 1da Luulyo oo ah maalintii xornimada Gobollada Koonfureed iy Israacii koonfur iyo Waqooyi. Annaga oo munaasabaddaas ka faa’iideysanayna ayaan sidoo kale la mataaneynay aasaaska Wargeyska Xaqiiqa Times, oo ah laba toddobaadle afka Soomaaliga lagu qoro oo Muqdisho kasoo baxa. Cadadkiisii 1aad wuxuu soo baxay 1dii Luuliyo, 2014.
Waxaa farriimo hambalyo ah oo ku beegan sanad guurada koowaad ee Xaqiiqa Times nala wadaagay siyaasiyiin, qoraayaal iyo saxafiyiin miisaan ku leh dalka Soomaaliya. Hoos ka akhriso hambalyada iyo bogaadinta ay akhristayaashaasi nala wadaageen.
“Hambalyo iyo bogaadin bahda Xaqiiqa Times sida kartida iyo howl-karnimada leh ee aad wararka dalka iyo dadka nooga haqab tirteen sanadkii aad jirteen. Guuleysta gacaliyeyaal” Wasiirka Qorshaynta iyo Iskaashiga Caalamiga ah, Mudane Cabdiraxmaan Yuusuf Cali Caynte.
“Xaqiiqa Times waa wargeyska kaliya ee ay ka muuqato xirfad iyo waayo aragnimo ee dalka gudahiisa kasoo baxa. Aad baan ula dhacsanahay qoraallada iyo faallooyinka uu Wargeysku bulshada usoo bandhigo. Waxaan ugu hambalyeynayaa shaqada ay u hayaan dalka, dadka iyo diinta oo ah tiirasha aasaaska u ah Xaqiiqa Times. Sanad guuro wacan.” Inj. Saalax Sheekh Cismaan, Wasiirka Hawlaha Guud, Guriyeynta & Dib Udhiska.
“Waxaan ugu hambalyaynayaa Xaqiiqda Times sanadguurada kowaad iyo sida wanagsan Aad wararka noogu soo tebisaan. Wanaaga meesha ka sii wada.” Danjire Maxamed Cali Nuur Ameeriko.
“Xaqiiqa Times waa wargeys aan ka helo macluumaad aan u baahi qabo oo isugu jira maqaallo iyo wareysiyo. Far Soomaali sax ah iyo daabacaad qurxoon ayaa u dheer.” Yuusuf-Garaad Cumar, Ruug Caddaa Saxaafadeed.
“Xaaqiiqa Times, sida magaca ku xardhan, waxay ka hadashaaa xaqiiqda maanta ka jirta wadanka. Waxaan ku jeclaystay sida ay runta ugu dhiirrato. Run ahaantii waxaa aad iisoo jiitay xirfadda iyo hufnaanta tafiftirayaasha oo aad ka dhex dhadhamin kartid hannaanka ay qoraalada usoo bandhigaan.” Abuukar Jaamac Cawaale, Guddoomiyaha La Dagaallanka Qaadka.
“Shakhsi ahaan waxaan u arkaa Xaqiiqo Times, warside oo qura ma ahane, sidoo kale waa tayo side, marka aan sidaa leeyahay waxaan ka duulayaa oo aan u duur xulayaa ilaa iyo xadka ay bilaa tayo tahay saxaafadda Soomaaliyeed ee maanta shaqaysa inteeda badan, waloow aan sidoo kale hubo inay jiraan duruufo qaarkood loogu cudur daari karo.
Xaqiiqa Times inta aan ka arkay waxay leedahay qaab saxaafadeed, qiyaas go’an, qorshe howleed, qababbaalkii war-gudbin iyo naqshaddii loo baahnaa marka laga shaqaysiinayo warbaahinta mideeda la daabaco.
Waxaan sidoo kale markii wararka laga yimaaddo aan aad ula dhacay faallooyinka ay qoraan aniga oo og in ay inta badan warbaahinta maanta dhankaas aad uga liidato oo aysan badnayn saxaafad Soomaaliyeed oo leh editorials ka tarjumaysa hab-socodka siyaasad hoosaadka ay ku shaqeeyso oo faallooyin falanqayn iyo lafa gur ah ka qora dhacdooyinka markaa taagan.
Waxaan dhamaantiin idin leeyahay hambalyo.” Max’ed Xaaji Xuseen Raage, Tifaftiraha GoolFM.net
“Wargeysyadu waa kuwa ugu faca weyn, uguna muhiimsan warfaafin oo dhan. Qiyaastii shan qarni kahor markii la daabacay wargeyskii ugu horreeyay, wax ogaal ah oo weyn looma heyn muhiimadda ay xogta qoran u leedahay nolosha aadmiga. Laakiin curashada wargeysyada waxay dibadda u soo saartay sida dadku ugu baahiqabeen helista xogta deegaankooda iyo tan bulshooyinka kale. Baahidaas oo weli taagan baa horseedday in la hindisho raadiyaha, telefishinka iyo xitaa warbaahinta casriga ah ee internet-ka. Sidaas darteed, XAQIIQA TIMES waxay horseed u noqon kartaa dib u nooleynta warbaahinta qoran oo gabaabsi sii noqonaysay tobankii sano ee la soo dhaafay. Hambalyo bahda Xaqiiqa Times oo hadda u dabaal-dagaya sanad-guuradii koowaad ee aasaaska wargeyska. Waxaan rajeynayaa in uu wargeysku qarniyo gaaro insha Allaah” Muxyadiin Axmed Rooble, Tifaftiraha Radio Ergo.
“Waxaa hambalyo iyo bogaadin mudan Bahda XaqiiqaTimes oo soo kordhiyay adeeg warfaafin oo waxbadan kaga duwan adeegyada lamidka ah ee horay dalkan uga jiray, marka laga eego dhanka nuxurka wararka, wareeysiyada iyo warbixinada kala duwan, XaqiiqaTimes muddadii halka sano ee ay jirtay waxii xaqiijisay in ay tahay ilwareed la isku halleyn karo oo kusoo kordhay dalka.” Maxamed Axmed Cabdullaahi, Suxufi ka tirsan Telefishinka Al Jazeera.
“Marka hore hambalyo bahda Xaqiiqa Times oo ay maanta oo kale ku beegan tahay sanad guuradii 1aad ee aasaaska Wargeyska. Xaqiiqa waa isha kaliya ee haddii aynu nahay dadka naafada ah codkeena kor u qaaday. Mar labaad waan u hambalyeynayaa dhamaan shaqaalaha iyo madaxda Wargeyska oo aan leeeyahay sanad guuro wanaagsan. Maxamed Cali Faarax, Madaxa Hay’adda Awoodsinta Naafada Soomaaliyed ee SODEN.
“Waxaan hambalyo iyo bogaadin u dirayaa bahda Xaqiiq Times oo u dabaaldagaya sanadguuradoodi koowaad. Waxaan rumeysnahay in Wargeyskan uu wax weyn ku soo kordhiyay saxaafada Soomaalida , kaalinta ay buuxiyeena ay tahay kaalin marneyd waayo waxaa sii lumayey kaalinta saxaafada la aqristo ama jaraa’ídyada oo hawada ka sii baxayay. Wargeyska oo aad looga akhristo Muqdisho ayaa waxaa keenay qoraallada hufan ee ay soo bandhigaan. Waxan idin leeyahay saaxibayaal Hambalyo dadaalka sii wada.”
Xasan Cali Geeseey, Agaasimaha Radio Dalsan iyo SIMHA oo ah dallad ay ku bahoobeen idaacado madax bannaan.
Waraaqaha iyo dhambaallada kale ee nasoo gaara ee ku aadan dabbaal degga Xaqiiqa Times dib ayaan idin kaga soo qori doonnaa haddii uu Eebe raalli ka noqdo.
Previous articleMusuqmaasuqa Shaqaalo Qorista Dowladda iyo Sida Looga Bixi Karo
Next articleCadaado: Saadaal Aan Suubbanayn!